Qoys Hindi ah oo dacwo ka ah seyga gabadhooda oo ku dhibaateysan Soomaaliya | Warkii.com
Home warkii Qoys Hindi ah oo dacwo ka ah seyga gabadhooda oo ku dhibaateysan...
Qoys Hindi ah oo dacwo ka ah seyga gabadhooda oo ku dhibaateysan Soomaaliya
Qoys kasoo jeeda magaalada Hyderabad ayaa dowladda Hindiya ka codsaday in laga saacido dib usoo celinta gabadhooda, oo sida ay sheegeen dhibaato ku dareemeysa gudaha Soomaaliya.
Qoyskaan Muslim-ka ah waxey ka walaacsan yahiin xaaladda gabadhooda oo shan caruur ah u dhashay nin Soomaali ah kaas oo lagu eedeeyay inuusan daryeelin sidoo kalana uu dhibaato u geystay.
Raheem Unnisa waa haweeneyda ay qoyskeeda sheegeen iney dhibaato ku dareemeyso gobollada dhexe ee Soomaaliya, waxeyna caruur u dhashay Omar Dahir Farah, muddo 10-sano ah oo ay Hyderabad ku wada noolaayeen qoyskaan waxaa u bilaabatay nolol adag markii uu Soomaaliya usoo kaxeeyay.
“Gabadheyda Raheem Unnisa waxaa guursaday Omar Dahir Farah sanadkii 2008, kaas oo wax ka baranayay Chennai, kadib guurkooda, waxey Hyderabad ku noolaayeen ku dhawaad 10-sanadood, waxeyna heysteen 4 caruur ah, bishii April 2017 ayuu gabadha iyo caruurtaba u raray Soomaaliya, hal canug ayaa halkaas ugu dhashay,” ayuu Sheikh Hyder Ali oo ah aabaha haweeneyda u sheegay wakaaladda wararka ANI.
Aabaha wuxuu sheegay markii gabadhiisa loo raray Muqdisho, in seygeeda uu guursaday naag kale isla markaana uu bilaabo inuu garaaco isla markaana uu dhibaateeyo waqti walba.
“Gabadheyda waxey heystaa shan Caruur ah, waxaana looga tagay guri ku yaala Galdogob oo ay leeyahiin qaraabadiisa, wuxuu la nool yahay xaaskiisa labaad iyo caruurtiisa oo jooga Muqdisho, masiiyo wax lacag ah, waxaa loo diiday iney hesho nolol maalmeed, gabadheyda mar walba oo ay isoo wacdo wey oysaa, waxeyna i weydiisaa hadii dib loo soo celin karo ama la badbaadin karo, canugeeda ku dhashay Soomaaliya ma heysto Baasaboor” ayuu mar kale yiri aabaha haweeneyda dhibaateysan.
“Waxaan dowladda Hindiya ka codsanayaa iney ii badbaadiso gabadheyda iyo caruurta ay dhashay sida ugu fudud ee ugu dhaqsiyaha badan”
Raheem Unnisa oo iyadana ay u suuragashay iney wakaaladda wararka ANI kula hadasho qaab maqal iyo muuqaal ah ayaa caawinaad dalbatay, waxeyna sheegtay iney dhibaato kala kulanto hooyada seygeeda.
“Waxaan halkaan ku joognaa qoys ahaan, waxaan dhibaato kala kulmaa maalin walba sodohdeey, waa inaan dawarsano cuntada, fadlan nagu caawiya inaan dib ugu laabano Hindiya”
Si kastaba arintaan ayaa kusoo aadeysa xilli dowladda Hindiya ay bilowday olole ay dib ugu celineyso dalkeeda muwaadiniin si xoog ah loogu heystay Soomaaliya oo ay shirkadii keentay u diiday wixii ay xaqa u lahaayeen.
Previous articleDiyaaradaha dagaalka Ethiopia oo duqeymo culus ka fuliyey gobolka Tigray-ga
Next articleGalmudug oo war ka soo saartay dagaallo ka dhacay duleedka Dhuusamareeb
Ergeyga gaar ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan oo u warramay Wargeyska Daily Xayaat ee ka soo baxa dalka Turkiga...
ITOOBIYA oo ‘arrin dhabar jab ku noqonaysa madaxda Tigrayga’ faray ciidamadooda